बंगालमा तृणमूलले जित्यो, बीजेपीले हाऱ्यो
पाँच राज्यको चुनाउमा सत्ता कस-कसको हातमा!
बंगालमा तृणमूल कांग्रेस असममा बीजेपी तामिलनाडुमा डीएके
2021 मा भारतको चार राज्य र एउटा केन्द्रशासित राज्यको विधानसभा चुनाउको घोषणा ???भयो। विशेष तीन राज्य बंगाल, तामिलनाडु र पुड्‌चेरीमा केन्द्रको बीजेपी दलमाझ राज्यको आञ्चलिक दलहरूको सोझै प्रतिद्वन्द्विता थियो भने असम र केरलामा केन्द्रिय दल कांग्रेसमाझ बिजेपीको प्रतिद्वन्दिता थियो। आसाममा बीजेपीले आफ्नो जग यथावत राखेर फेरि सत्तामा आउन सफल भयो भने बंगालमा बीजेपी सत्तामा आउन नसके तापनि 24 गुणा अधिक सीट ल्याएर मुख्य विपक्षी दल हुन सफल भयो | बंगालमा बामफ्रण्ट र कांग्रेस भने पूर्ण रूपले सखाफ भयो। पुड्‌चेरीमा गठबन्धन दलकै रूपमा चुनाउ लड़े पनि बीजेपी फेरि सत्तामा आउनु सफल भयो। केरलामा लेफ्टफण्टले सत्ता हासिल गर्न सके भने कांग्रेस मुख्य विपक्षी दलको???अघि आयो। त्यसरी नै तामिलनाडुमा कांग्रेस गठबन्धन डीएमके सत्तामा आउन सफल भयो भने बीजेपी गठबन्धन दल एआइएडिएमके-ले आफ्नो सत्ता गुमाउनु पऱ्यो।
यसरी कोरोना कालको समयमा चुनाउ प्रचार अभियानले भयावह स्थिति बनाएको यस देशमा अब सत्तामा आउने दलहरूलाई भने ठूलै चुनौती भएको छ। भारतमा भएको कोरोना महामारीले देशको धेरै मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ भने चिकित्सा संसाधको कमीले देश लाचार भइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा यी राज्यरूको नयाँ सरकारलाई भने चिकित्सासँगै विकासको चुनैति पनि त्यतिकै भएको छ।
बंगालमा फेरि तृणमूल, कारण के?
बाङ्‌ला निजेर मे के चाइ!
बंगालमा यसपाली तृणमूल कांग्रेसले भने हेट्रिक गरेको छ। तीनपल्ट सरकारमा आएर तृणमूल नेत्री ममताले ‘मोदी है कि मुमकिन है’ लाई ठूलै चुनैति दिएको छ। बंगालमा मोदीको विकास र हिन्दु कार्डले काम गरेन। कांग्रेस र बामफ्रण्टले आफू सुसाइड बम भएर आफू पनि मऱ्यो आफ्नो प्रतिद्वन्धी बीजेपीलाई पनि मारेर ‘बाङ्‌ला निजेर मे के चाइ’-को स्लोगनलाई यथार्थमा परिणत गऱ्यो।
ममताले बंगालको मतदाताहरूको मन जित्न सबैभन्दा ठूलो पोलेसी मुस्लिम कार्ड खेल्यो। भारतको चुनाउ आयोगको नियम विरूद्ध गएर ममताले सोझै मुस्लिम शब्द प्रयोग गरेर बीजेपीलाई बंगालमा पस्न नदिन ‘सबै मुस्लिम एक हुनुपर्छ’ भन्ने नारा प्रायः मञ्चबाट दिइन्‌। जसको प्रभावले झण्डै 90 सीटमा मुस्लिम भोटहरू बहुमतले भोट दिएको देखियो। अन्ततः यही नै ममताको ठूलो जीत भयो।
ममताले यसपालीको चुनाउमा केन्द्रको बीजेपी दल ठूलो चुनौतीको सामना गर्न पऱ्यो | बीजेपी दलले साम, दाम, दण्ड, भेद यी चारै मन्त्र प्रयोग गरेर तृणमूलका धेरै मन्त्री विधायकहरूलाई आफूपट्टी ताने तापनि सत्तामा आउन नसक्नुको कारण मोदीले आफ्नो नीति विरूद्ध गरेको कार्यको परिणाम हो। मोदी र बीजेपी सरकारले जहिले पनि ममता सरकारलाई कटमनी र तुष्टिकरणको राजनीति गरेको आरोप लगाए तापनि ममता सरकार मै रहेको दागी नेताहरूलाई आफूपट्टी ल्याएर चुनाउमा टिकट दिनु ठूलै भूल गऱ्यो। जसको फलस्वरूप पुराना बीजेपी कार्यकर्ताहरू भने एक प्रकारले भित्रभित्रै पार्टीको कार्यप्रति रूष्टरहेको प्रमाण पाइयो। बंगालमा 32 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय छ अनि 92 सीटमा यी समुदायको बाहुल्य छ। बीजेपीले बंगालमा ‘जय श्री राम’-को नाराले सोझै हिन्दु समर्थक नभएर हिन्दुको रक्षा गर्छौ भन्ने विचार राखेकाले अल्प संख्यक मुस्लिम एक भएर ममतालाई भोट दिएका हुन्‌। सबैभन्दा ठूलो बंगालमा धर्म भन्दा पनि यहाँका मानिसहरू भाषाप्रति मोह भएकाले बीजेपीका बाहिरी स्टार प्रचारकहरू बंगालमा आउँदा ममताले सोझै आउनट साइजर हिन्दी भाषीहरू भनेर हिन्दु-मुस्लिम बाङ्‌ला भाषीहरूलाई एक बनाउन सफल भएकी थिइन्‌। जसको कारणले ममताले यसपाली पनि हेट्रिक लगाउन सफल भइन्‌।
समाधनको जीत :
दार्जीलिङ, अलिपुरद्वार र कालेबुङको एउटै पनि सीटमा तृणमूल कांग्रेसले खाता खोल्न सकेन। यसको मुख्य कारण के हो त भन्ने प्रश्न आउँदा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाह स्वयम्‌ यस क्षेत्रमा आएर यहाँको राजनैतिक स्थायी समाधान गर्ने वचन दिएकाले हो। यसै आधारमा कालेबुङको एउटा सीट छोड़ेर दार्जीलिङ र अलिपुरद्वारका सबै सीटमा बीजेपी दलको विजय भएको छ। कालेबुङमा पनि निर्दल उम्मेद्वार रूदेन सादा लेप्चा यहाँको राजनैतिक स्थायी समाधान कै पक्षधर हुन्‌। ????उनी निर्दलबाट विजय हुनुको पछाड़ि पनि केही कारणहरू छन्‌? तीमध्ये मूलतः यिनी लेप्चा अनि ख्रिस्टियन भएकाले यीनला यी दुइ समुदाय र धर्मावलम्बीहरूले सोझै समर्थन गरेका हुन्‌। यस क्षेत्रमा 40 प्रतिशत भोट फ्याक्टर यस समुदाय र धर्मावलम्वीमा नै छ। यस अतिरिक्त रूदेन सादा लेप्चा एक स्वच्छ ????? व्यक्ति भएकाले जनताको भोट यिनीप्रति गयो। यद्यपि यिनी पनि पहाड़को समस्यालाई समाधान होस्‌ भन्ने पक्षका नै हुन्‌। अब प्रश्न आउँछ, पहाड़का तराई अनि डुवर्सका जनताले बीजेपीला विश्वास गरेर सबै सीटमा जिताएका छन्‌। के अब बीजेपी बंगालमा हारे पनि केन्द्रको मिटो प्रयोग गरेर गोर्खाहरूको ???? राजनैतिक समाधान गर्छ भन्ने सबैमा प्रश्न रहेको छ। अब जनताले आफ्नो मत दिइसकेका छन्‌। यहाँ अलिपुरद्वार बीजेपी दलका सांसद जोन बारला अनि दार्जीलिङका विजेपी सांसद राजु विष्ट एवं 11 जना विधायकहरू एक भएर यस मागको निम्ति केन्द्र सरकारलाई कड़ा प्रकारले दवाब दिन अनिवार्य छ। नत्र भने 2024 पनि केन्द्रमा बीजेपी सरकार रहन्छ-रहँदैन त्यसको केही ग्यारेन्टी नभएकाले गोर्खा माग माछा-माछा भ्यागुता हुनसक्छ।
01 23:51:14 Dec 2021